LEEK: SIDAAD U KORI LAHEYD GOOBTAADA AADNA U SIISID DHIRTA LEH DARYEELKA LAGAMA MAARMAANKA AH - LEEK SII KORDHAYA
Leek ma aha mid caan ah sida caadiga ah, oo ma aha mid aad u fudud in la helo on sariirta beerta dalka.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu jecel yahay in muddo dheer la fahmo in beerashada warshadani ay tahay mid aad u jaban oo sahlan.
Waxaa intaa dheer, geedi socodka ah ee caleemaha sii kordhaya ku dhowaad kama duwan ka beerista caadiga ah ee dhammaan dhirta beerta, iyo sidoo kale keeno badan oo farxad.
Sidaa darteed, maqaalkeena waxaa si buuxda loo sifeyn doonaa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida loo diyaariyo beeritaanka iyo hirgelinta naftaada beertaada.
Ha iloobin inaad ka hadashid sida loo bixinayo dayactirka sirta oo dhan xilliga sii kordhaya.
Maxay yihiin sifooyinka iyo qarsoodiga ah ee loo yaqaan 'leek': si aan u ogaano dhammaan nuucyada
Leek wuxuu leeyahay magac kale oo aad u qurux badan - basasha luul. In kasta oo xaqiiqda ah in dalkeena aan aad u badan tahay sida warshad guriga lagu geli karo si toos ah beerta u gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, dhirta this waa dhaqan aad u qadiimiga ah iyo faa'iido leh, taas oo ah sababta beeraha casriga ah fiiro gaar ah u leek. Ka dib oo dhan, waxaad cuni kartaa ma aha oo kaliya afkoda, laakiin sidoo kale caleemo jilicsan.
Cagaarashada looska waxaa badanaa lagu sameeyaa caawinta miraha, taas oo laga iibsan karo dukaanka khaaska ah, laakiin beeritaanka tooska ah ayaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo geedo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtagal ah in laga beerto geedkan iyada oo aan abuur, haddii xaaladaha cimiladu ay u oggolaan karaan.
Maxay yihiin xaaladaha koritaanka ee aad u baahan tahay si aad u bixiso sifeeyaha ama shuruudaha beertaada?
Marka la eego xaaladaha koronto ee sii kordhaya, ka dibna warshadkan waxaa lagu magacaabi karaa kulaylka-jecel ilaa xad, tan iyo geedo badanaa waxay u dhowaadaan xagaaga xagaaga. Si aad u korodho waxay u baahan yihiin badan oo qorrax leh iyo kuleyl. Sababtan awgeed, ee ku xigta caleenta, gaar ahaan koonfurta iyo koonfur galbeed, waxaa fiican in aan lagu beerin dhirta xooggan koraya.
Goobta mugdiga ah, caleemaha caleenta ma noqon doonto mid aad u cagaaran, iyo dhadhanka basasha ayaa sidoo kale laga yaabaa inay xanuunto.
Xaaladaha heerkulka gaarka ah ayaa loo baahan yahay geedo. Marka ay koraan sanduuqyada carrada waxaa aad u muhiim ah in heerkulku uusan aheyn mid aad u sarreeya. Sababta ayaa ah in xaqiiqda ah in leh tiro badan oo kulaylka, geedo ku bilaabi kartaa falleed ubax isla markiiba sanadka ugu horeeya, oo aan ku jirin labaad sida ay tahay in ay caadi ah.
Marka beerashada abuurka, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo kijadaha peat-perchny iyo kiniiniga peat. Waxay siin doonaa abuur basasha badan oo nafaqooyin ah waxayna gacan ka geysan doonaan kobaca wanaagsan ee geedo.
Ha iloobin inaad waraabiyo geedo leh xal compost ah. Waxay u baahan yihiin geedka inta lagu jiro muddada koritaanka oo dhan meel bannaan oo ku xiran, taas oo ka soo horjeeda sariirta furan, nafaqooyinka kama helin jawiga dibedda.
Marka laga beerto geedo beerta, ma jiri doonaan shuruudo gaar ah ee ciidda, inkasta oo bacarimisku waa in la fuliyaa xaalad kasta waxaana lagu talinayaa in si joogta ah loo sameeyo. Waxa kaliya ee muhiimka ah waa in ciidda ay noqoto mid iftiin leh, iyada oo aan wax dhibaato ah oo qoyaan ah laftiisa lafteeda oo aysan ku hayn waqti dheer.
Marnaba, ha ku beerin sifaha sariiraha oo kale, halkaasoo dhulka hoose ay u kici karaan heerka xididada dhirta. Tani waxay keeni kartaa dhaawac halis ah geedka.
Ugu wanaagsan ee dhan, kuwii ka horreeyay ee dhirta this beerta ahaayeen baradho, yaanyada leh qajaarka, digirta, ama kaabajka cad.
Tilmaamidda wakhtiga dhirta laga beerto: kala hadal shuruudaha heerkulka hawada iyo carrada
Xagga sare, waxaan mar hore u sheegnay in caleemaha la beeray siyaabo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan, taas oo si toos ah ugu xiran xaaladaha cimilada ee gobolkaaga. Sidaa darteed, haddii aad samayso beerista kiniiniga ah ee abuurka koonfurta ee waddankeena, markaa waxaa lagu talinayaa in ay sidan sameyso tan aan ka horeyn 15-kii Maajo.
Iyadoo qoyaanka ciidda wanaagsan iyo heerkulka aan ka yareyn 12ºS, miraha si dhakhso ah ayey u koraan oo u koraan.
Gobollada waqooyi intooda badan, waxaa fiican in la doorto habka seedling ee koritaanka dhirta. Xaqiiqdu waxay tahay in xilli sii kordhaya ee basasha uu yahay mid aad u dheer iyo beeray abuurka shuruudaha leh mudo gaaban oo kuleyl ah, ma uu yeelan doono wakhti si uu u ruxo cabbirka iyo xaaladda.
Laakiin ka hor geedo si ay u beerto waxay wali u baahan tahay inay beero:
Haddii miraha lagu beeray sanduuqyo on windowsill ah, marka ugu fiican ee tani waxay noqon doontaa bartamihii ama bishii February. Xaaladahan oo kale, dhidibku ma kori doono oo horumarin doono si aad u xoogan, laakiin wakhtigu wuxuu ku habboon yahay xubin jidhka ah, geedo ayaa noqon doona mid qaan gaar ah oo awood u leh inay si fudud u qabsadaan xaaladaha cusub. Qodob kale oo ku saabsan habkan geedo sii kordhaya waa in dhererka iftiinka qoraaga ee leetku uusan aheyn wax ka yar 10 saacadood. Laga soo bilaabo bishii Febraayo iyo bisha koowaad ee guga waa mid aan suurtagal ahayn, dhirta waxay noqon doontaa in si cad loo iftiimiyo.
Haddii uu jiro aqalka dhirta lagu qurxiyo ee ku yaal beertaada, waxaad xor u tahay inaad ku beerato barafka horeba bartamihii Abriil. Xaaladaha noocaas ah, miraha si dhakhso ah u koraan iyo koritaanka geedo noqon doonaa mid aad u daran.
Beerka ubaxa waxaa sidoo kale lagu beeray si toos ah naaska nambarka dhammaadka Abriil, laakiin waxaa lagu talinayaa in sariirta oo dhan laga dhigo filimka illaa iyo inta kulaylka dagan yimaado. Si kastaba ha noqotee, waa inaad si taxadar leh u noqotaa miraha germinating iyo geedo ka soo baxa iyaga, si aysan u daboolin filimka hoostiisa oo ay helaan oksijiin ku filan iyo iftiinka qorraxda.
Beeray geedo beerta waxay noqon kartaa May, marka ciidda si fiican u kulmaan. Maskaxda ku hay in ay leedahay koritaanka gaabis oo diyaar u noqon doonto in lagu bedelo ka dib 6-8 usbuuc laga bilaabo wakhtiga beerashada. Ku saabsan diyaargarowga for beerto waxay tilmaamaysaa dhexroorka of afkoda geedo - 5-8 millimitir, iyo sidoo kale muuqaalka of 2-3 caleemo on.
Waa maxay diyaarinta iyo beerista ubaxyada?
Abuurka of this basasha ma isla markiiba tuurin bacda dhulka. Intaas ka hor, waa in la nadiifiyaa, taas oo ah, jeermiska. Tani waa mid aad u fudud oo degdeg ah: marka hore, mudo gaaban, waa in lagu dejiyaa biyo kulul ilaa 40-45 ° C, kadibna isla markiiba ku qaboojiso biyo qabow.
Ka dib qaabsocodkan ka dib, miraha dhirta waa in aan lagu shubin lakabka qaro weyn oo qoyan oo qoyan, ku dabool oo ku dhaaf meel diirran si ay u soo baxaan. Si kaamil ah, si aan heerkulka uusan hoos udhicin 25 ° C, markaa macno ahaan 2-3aadna waxay bilaabi doonaan inay yartahay wax yar.
Kadibna waxaa suurtogal ah in la qalajiyo waxoogaa yar si aysan isu wada dhicin iyo kala firdhinta. Ka dib markaa, waxaad isla markiiba bilaabi kartaa inaad ku beerato ciidda. Laakiin tiknoolajiyadda tiknoolajiga ayaa ku habboon abuurka miraha dhabta ah, sababtoo ah kuwa iibsaday markiiba waxaa loo diri karaa ciidda, maadaama ay badanaa la iibiyo horay loo shaqeeyay oo si dhakhso ah Gagaash.
Sida heerkulka loo baahan yahay ee biqilka, isla markiiba ka dib markii lagu beeray abuurka ee dheryihii, waa in lagu hayaa heerkulka hawada laga bilaabo 22 ilaa 25 º C leh heerkulka iyo qoyaanka ciidda.
Sidoo kale, ciidda ku jira filimka, taas oo, ka dib muuqaalka kulanno si qasab ah laga saaro. Dheeraad ah, heerkulka waa in yar la yareeyo ilaa 17 ° C inta lagu jiro maalinta iyo 12 ° C. Hal toddobaad kadib, xaaladaha heerkulka waxay u baahan yihiin in la yareeyo, taas oo kicinaysa koboc aad u xoogan: maalintiiba laga bilaabo 17 illaa 20ºS, iyo habeenkii - laga bilaabo 10 ilaa 14 º.
Sidoo kale, si loo wanaajiyo waxtarka koritaanka ee xajmiga mustaqbalka iyo si geedo si ay u dhisto, waa in la dhejiyo bil ka dib soo baxa, tega fogaan ah 2-3 sentimitir inta u dhaxaysa afkoda.
Sidoo kale, waa mid aad u muhiim ah in si joogto ah ula socdo dhererka caleemaha geedo, taasoo ka dhigaysa qiyaastii heerka 8-10 centimitir. Nidaamkan noocan oo kale ah ayaa si fiican uga muuqan doona koritaanka xididka iyo dhumucda dhererka.
Goobta furan, miraha waxaa lagu beeraa oo kaliya gobollada koonfurta, laakiin waa in la dhexdhexaadiyo xariiqda dhexe si ay u soo diraan sanduuqyada ciidda, ama dhalooyinka ama filimyada lagu koriyo.
Abuurka miraha waxaa loo kaydin karaa waqti dheer. Waxay soo saaraan caleemo wanaagsan xataa saddex sano ka dib. Waxa ugu muhiimsan waa in lagu hayo meel qallalan oo diiran, ma aha in la oggolaado dhibcaha heerkulka iyo qoyaanka.
Waxaan ku hawlan nahay diyaarinta sariiraha lagu beero beerta
Diyaarinta sariiraha sidoo kale looma diidi karo, maaddaama ay ka timaaddo in baaxadda iyo tayada dalagga mustaqbalka ay ku xirnaan doonaan. Gaar ahaan, xilliga dayrta qiyaastii 6 kiilogaraam oo compost ah ayaa la soo saarey 1 m2, taas oo guga la siin doono waqti gaaban oo wax burburiya isla markaana si weyn u kordhiya heerka bacriminta ciidda.
Guga, waxaad sidoo kale ku daadi kartaa humus ama compost isku sariirta sariirta, iyadoo qiyaasta qiyaasta ah ee 3 kilo oo bacrimin ah halkii 1 m2. Isla mar ahaantaana, ka hor laga beerto, ma aha lagama maarmaan in la qodo sariir leh leh Bacriminta la dhigay on on, waxay ku qodayaan inta lagu guda jiro beerto ee geedo naftooda.
Diyaarinta geedo of leeks for beeritaanka ciidda furan
Horeba 6-7 toddobaad ee koritaanka geedo waxay u baahan tahay si tartiib tartiib ah loogu diyaar garoobo. Gaar ahaan dhirta wax yar oo adagsi ay u bilowdo in la isticmaalo qolka, laakiin si xaaladaha dabiiciga ah ee koritaanka. Si arrintan loo sameeyo, sanduuqyada qoraxda leh geedo waxaa lagu sameeyaa waddada, haddii xaaladaha cimiladu ay oggolaadaan.
Ka hor inta beerto, geedo waxaa laga soo baxaa ciidankii hore, ka hor inta aan la waraabin. Waxaa lagu talinayaa in la jarjiyo xididada oo yara ka baxo, yaraynta dhererkooda 1/3.
Beerta Golaha: Si geedo caleenta si ay u degaan si ka wanaagsan oo dhakhso ah meel cusub, ka hor inta laga beerto, xididdadiisa waa in lagu riixaa hadal. Halabuurka wadahadalka waa inuu ku jiraa tiro isku mid ah dhoobo iyo lo'da digir yar oo la qasi karo biyo.
Xeerarka iyo qorsheynta abuuritaanka geedo of leeks: sida loo xaqiijiyo aagga nafaqada ugu wanaagsan ee dhirta?
Geedo of dhirta beeray godadka si gaar ah loo diyaariyey. Qolfaadadoodu waa inay ahaato mid weyn oo ku filan si ay u noqoto qadar ku filan oo qoyan oo la jajabiyey humus ama compost la geyn karo hoos. 10-13 sentimitir ayaa ku filan tan.
Kaliya hal warshad ayaa lagu beeray hal ceel, tan iyo caleenta ma koraan habka baadiyaha. Taas ka dib, geedo ayaa lagu daboolay dhulka ilaa nus god oo si fiican u farsameeyeen.
Sidaas darteed ciidda waxaa la dejiyaa sida ugu dhow ee suurtagal ah, waa in la waraabiyo fara badan ka dib markii laga beerto. Waxa ugu muhiimsan waa in aysan jirin barkimooyin meel u dhow xididada kuwaas oo qalajin kara.
Sida nidaamka laga beerto geedo caleenta, ka dibna warshad waxaa lagu beeray karaa siyaabaha soo socda:
Geedasho geedo caleenta ah laba saf, taas oo ku taal fogaan ah 15-20 sentimitir inta u dhaxaysa dhirta hal xaraf. Isla mar ahaantaana, masaafada u dhaxaysa safafka waa in aysan ka yarayn 30-35 sentimitir. Beeraha noocan oo kale ah ma aha mid dhaqaale badan marka loo eego qaybinta baaxada beerta oo dhan, si kastaba ha ahaatee, waxay ka dhigaysaa suurtagal in la koro nalalka aad u ballaaran.
Iyada oo la beero badan, beerta lafteeda ma gaari karto cabbir aad u culus, laakiin dhalidda ayaa weli ah mid sarreeya sababtoo ah beeritaanka ugu dhow ee geedo. Gaar ahaan, masaafada u dhaxaysa laba dhirta hal xaraf ayaa loo dhimi karaa 10-15 sentimitir, iyo inta u dhaxeysa saf ilaa 20-30 sentimitir.
Inta badan dhirta beerta, iyo dhididka ma aha mid ka reeban, waxaa ugu badan ee la aqbali karo si ay u koraan sariiraha dhuuban. Tani ma aha oo kaliya fududeynaya daryeelka dhirta, laakiin sidoo kale kordhiyaan wax soo saarkooda.
Haddii aad dooratid nidaam beeraajid ah oo laba layn ah, markaa ma aha lagama maarmaan inaad ka baxdo xannibaadyada ballaaran. Iyaga iyaga, waxaad ku beeran kartaa dill ama karootada, kaas oo ah cayayaanka si fudud uula socdo. Sidoo kale, xaafad wanaagsan ayaa soo jiidi karta celery, xididdo, basal caadi ah, iyo xitaa strawberries.
Waa maxay xannaanada saxda ah ee sifooyinka: waxaan si faahfaahsan uga sheegnaa dhinacyada ugu muhiimsan
Wanaagsan si ay u koraan, u koraan oo u bixiyaan miraha oo keliya dhirta duurjoogta ah, laakiin kuwa ay hareeyeen nin, waxay u baahan yihiin daryeel khasab ah. Qoraalkan waxaa shaki ku jiraa leeches, dhumucdiis iyo qiyaasta taas oo si toos ah ugu xiran tahay qiimaha nafaqada ee ciidda iyo sida caadiga ah ee waraabka.
Xakamaynta ciidda agagaarka ciridka: Sababta iyo inta jeer ee la sameeyo?
La dabciyo ciidda beertii ah ee kor u kaca siriyuhu waa muhiim. Ka dib oo dhan, nidaamka noocan ah ma aha oo kaliya u oggolaanaya ciidda in ay la sumoobo oksijiin, laakiin sidoo kale ka qaybqaataa galin si deg deg ah oo qoyaan galay, iyo sidoo kale fududeeya koritaanka ee xididdada. Si joogto ah u dabooldoorbidayaa 1-2 toddobaad kasta.
Inta lagu jiro dabacsanaanta ciidda, waxaa kale oo muhiim ah in si joogto ah loogu daadiyo ciidda godka meel u dhow dhererka caleenta (tani waa la sameeyaa si loo gaaro jirida warshadda leh dhexroorka qalinka).
Ka dib markii daloolka horeba heerkiisu yahay heerka ciidda, lakabka waxay buuxiyaan labadii toddobaadba mar. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad koraan dhafo dheer oo leh qayb weyn oo caddaan ah. Nidaamkan waxaa la sameeyaa ugu yaraan 4 jeer hal xilli xilli ka dib markii la waraabiyo.
Waxaan ku siin karnaa basasha qoyaan: xaddiga iyo mugga waraabinta
Qoyaanku waa saldhigga koboca cagaarka.
Ka dib oo dhan, warshadani waxay u baahan tahay fiiro joogto ah oo joogto ah ka soo nadaafadda beerta, taas oo loogu talagalay in lagu go'aamiyo gobolka ee qoyaanka ciidda.
Gaar ahaan, waraabinta joogtada ah iyo ka badan ee warshad waa in la fuliyaa daruuri, tan iyo markii ay soo galaan xilli sii kordhaya iyo ilaa xagaaga bartamihii.
Dabcan, in xad dhaafka ah qoyaanka ma aha mid u qalantaa, taas oo sidoo kale si xun u saameyn doonaa koritaanka dhirta.
Miyaan u baahanahay dhoobka dharka sare iyo waxa Bacriminta ee baahida loo qabo in la isticmaalo?
Mabda 'ahaan, dhidibka ma quudin karo. Laakiin, kiiskan, si loo gaaro natiijooyin heer sare ah ma shaqeyn karo. Sidaas awgeed way ka fiicantahay in la shaqeeyo waxoogaa yar oo ay ku qaataan dadaalkooda ku saabsan quudinta geedkaan.
Si loo fuliyo nidaamkan ayaa la mid ah waraabka, kaliya qeybta hore ee xilliga sii kordhaya ee geedka. Basasha ayaa si gaar ah loogu quudiyo xalalka loo diyaariyey digaagga iyo digirta lo'da. Fiirinta ugu horeysa ee biyaha waa inay ahaataa 1:20, iyo labaad - 1: 8. Sida caadiga ah ee dharku waxay u suurtagelinaysaa in ay heerarka cilladaha xitaa badi ciidda bacrin ah.
Sidee si wax ku ool ah ula macaamilaan cawska sariiraha leh leek?
Sariiraha geedaha ayaa ah habka ugu waxtarka badan ee lagu xakamayn karo haramaha. Dabcan, bannaanka casriga ah ayaa yaqaanno jiritaanka kiimiko kala duwan oo ka hortagi kara soo bixitaanka cawska. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku koraan basasha beertaada, waxaa fiican inaad ku koraan alaab jawi bey'adeed oo dabiici ah oo lug ku leh iyada oo loo marayo beerta ay ka saarto dhammaan haramaha. Ka dib oo dhan, oo leh tiro badan oo iyaga ka mid ah, dhumucdiisii ​​basasha afkoda si weyn u yareeyo.
Sidoo kale, waxay keeni kartaa kordhinta qoyaanka ciidda. Si sariirta ujoogsaneynin dhirta aan loo baahnayn, si joogto ah u xaji.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Leek sii kordhaya 2019